စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခရီးဒီတော့အပြည့်အဝရှိပါတယ် Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 7, 2010 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 7, 2017 Douglas Karr
ငါနားထောင်နေတယ် အဆိုပါသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစီမံကိန်း။ ဒါဟာတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စီမံကိန်းပါ ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲ အင်တာနက်ပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖန်တီးမှုအကြောင်းပြောနေတာပါ။ ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာကငါ့ကိုကူညီဖို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီလူတွေကိုငါနားထောင်နေရင်း…သူတို့ထဲကအတော်များများဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။
ပထမ ဦး စွာစာရင်းကိုသင်ဖတ်ရှုသည်နှင့်သင်၏အိမ်စာကိုလုပ်ပါ အွန်လိုင်းသူတို့ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတည်ဆောက်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကသြဇာညောင်းပြီးပြီ ပြီးတော့ အွန်လိုင်းသွားလေ၏။ အောင်မြင်သောစာအုပ်များရေးသားခြင်းသို့မဟုတ်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖန်တီးပေးခြင်းတို့ကြောင့်အခြားသူများသည်သြဇာညောင်းသည်။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ပြီးသားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့သဘောမတူပါဘူး အွန်လိုင်းကလူကိုလွှမ်းမိုး.
ငါ့ကိုမယုံဘူးလား သွား လူများ၏စာရင်းကိုချ အွန်လိုင်းတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုအမှန်တကယ်ဖန်တီးသောသူများကိုဝိုင်းရံပါ။
အန်း Handley, အန်း Holland, ဘရိုင်ယန် Clark က, ဂျေဆန်ရေတံခွန်, Liz Strauss, Hugh MacLeod, Dan Schawbel, စတိဗ် Woodruff, ခရစ် Garrett... အနည်းငယ်အမည်ပေးရန် ... ဒီလူတွေကသူတို့မခြစ်ခင်၊ သွေးထွက်၊ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ သူတို့ကအန္တရာယ်များကိုယူပြီး piggy ဘဏ်များကိုအစည်းအဝေးများသို့သွားရန်၊ နံနက်နက်နက်အထိအလုပ်လုပ်ရန်၊ တစ်နေ့တာအလုပ်များနှင့်စကားပြောသောအလုပ်များလုပ်ရန်၊ အလုပ်ပြုတ်ခြင်း၊ ဘလော့ဂ်များနှင့် ebooks များရေးသားခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သိသောလူအချို့ကကျွန်ုပ်သည်တစ်နှစ်မပြည့်မီတွင်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်မပြည့်ခင်? တကယ်လား ရှေးရှေး - ငါဒီလုပ်ငန်းကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဖောက်သည်တွေအကြောင်းဘလော့ဂ်လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော့်အကြီးအကဲတွေကိုဆယ်နှစ်လောက်ဒုက္ခပေးခဲ့တာ။ နှစ်ပေါင်းများစွာအိပ်စက်ခြင်းမရှိ။ ၇ ရက်အလုပ်ရက်သတ္တပတ်များ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့သည်။ ငါစီမံကိန်းရှိသူများကဲ့သို့တူညီသောသြဇာညောင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပင်ကျွန်ုပ်မနီးပါ။ သို့သော်သူတို့ရှိနေသည့်နေရာကိုရောက်ရန်သူတို့ကြိုးစားအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
The Influencer Project ကိုနားထောင်သည့်အခါရယ်စရာကောင်းသည် ဒီသြဇာ တကယ်အတိအကျဘယ်လိုမေ့လျော့ကြပြီ သူတို့ ရောက်ပြီ ငါကဲ့သို့သောအရာတို့ကိုမကြားရဘူး…
Bajillions ပြုလုပ်ရန်၊ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်ကိုရေးရန်၊ များစွာသောကိစ္စရပ်များ၊ ရယ်စရာကောင်းသော caustic ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ရန်၊ အောင်မြင်သောရိုးရာအေဂျင်စီတစ်ခုကိုစတင်ရန်နှင့်အွန်လိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက်ဖြစ်ပျက်သောအဆင့်မြင့်စွန့်စားမှုကြီးသောကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းပါ။
လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှကိရိယာအချို့ကိုစတင်အသုံးပြုခြင်းစသည်ကဲ့သို့သောကွမ်းရိုင်းများကိုငါကြားခဲ့ရသည်။ မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား? Tools များရုံ ... tools များဖြစ်ကြသည်! ငါ့ကိုဆေးသုတ်ထားသောအလေးတစ်ချပ်နှင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပေးပါ။ စတုတ္ထတန်းကျောင်းသားများ၏အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုကျွန်တော်ပြပါမည်။ လူတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်ပေးကမ်းခြင်းကသူတို့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်မကူညီနိုင်ဘူး၊ ငါ့ကိုဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုပေးတာကငါ့ကိုနိုဘယ်ဆုရဖို့ကူညီပေးတယ်။
ပရောဂျက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါ့ကိုမှားတာမဟုတ်ဘူး။ ငါတကယ်ခါးသီးတယ်မဟုတ်ဘူး။ 🙂
ဒါဆို ... မင်းလူတွေကိုလွှမ်းမိုးချင်တာလား။ သင့်၏အတွင်းနှင့်အပြင်ကိုသိသည်အထိသင်၏ယာဉ်ကို Hone လုပ်ပါ။ သင့်နာမည်ကိုထုတ်ယူရန်အတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းရန်အခွင့်အလမ်းတိုင်းကိုယူပါ။ လူတိုင်းကိုကူညီပါ။ သင်၏အလုပ်ရှင်အစားသင်၏အနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါသို့မဟုတ်နောက်လစာတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါ။ မအောင်မြင် မအောင်မြင် မအောင်မြင် မအောင်မြင် မအောင်မြင် ထပ်မအောင်မြင်ပါ သင့်နာမည်ကိုထုတ်လိုက်ပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွမ်းကျင်သူဟုခေါ်ပါ။ လှောင်ပြောင်ပါ။ စကားပြောပါ၊ နို့စို့မယ်၊ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါ
ကျွန်တော့်ရဲ့စက္ကန့် ၆၀ ပြည့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်
မှတ်ချက် - FastCompany သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Influencer စီမံကိန်းကိုပြုလုပ်နေပုံရသည်။
Tags: အန်း Handleyအန်း Hollandဘရိုင်ယန် Clark ကခရစ် Garrettdan schawbelဟွမ် macleodသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုJason ကျသွားတယ်liz strauss ပါSteve Woodruffအဆိုပါသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစီမံကိန်းကို
7:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 56
အကောင်းဆုံး ပို့စ်တင် အမြဲတမ်း
8:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 46
မင်းရဲ့စက္ကန့်ခြောက်ဆယ်ပြည့်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကောင်းတယ်၊ ငါနှစ်ခါဖတ်တယ် ..
8:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 35
ဂရိတ် post ကို Doug ။ ငါရုံအဖြစ်ကောင်းစွာကွန်ဖရနားထောင်ခဲ့တယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဲဒီမှာလုပ်အချို့သောကောင်းသောအချက်များရှိခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်သင့်ရဲ့ post ကိုအများကြီးနှင့်အတူသဘောတူသည်။
8:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 19